မျက်စဉ်းကို ဖော်ပါ့မယ် ဆရာကြီး” “မနက်စောစောမှာ စံပယ်ပင်က စံပယ်ပန်း(၃)ပွင့် ခူးယူရမယ်။ ရေပြောင်အောင် ဆေးရမယ်။ စံပယ်ပင် မရှိတဲ့သူကလဲ စံပယ်ပန်းရောင်းတဲ့ဆီကဝယ်ပေါ့။ဒါပေမယ့် ခပ်လတ်လတ်ကို ဝယ်ပါ။ နွမ်းရင် မယူနဲ့။ “အဲဒီ စံပယ်ပန်းကို ဖန်ခွက်အလွတ်တစ်ခုမှာ ထည့်ရမယ်။ နောက် ရေသန့်သန့် ဖန်ခွက်(၃)ပုံ (၂)ပုံ ထည့်ရမယ်။တစ်နေ့လုံး စိမ်ထားရမယ်။ ညမှာ မျက်စိကို ခတ်ခါနီး ပန်းကို ဖယ်ပစ်လိုက်၊ အဲဒီရေကို အဲဒီည မျက်စိကို ခတ်။ပထမဦးဆုံး ခတ်တဲ့နေ့ နံနက်မှာ မျက်စိမှာ ထူးထူးခြားခြား မျက်ချေးတွေ ပိတ်နေလိမ့်မည်။
အဝတ်ပွတစ်ခုကို ရေဆွတ်ပြီး မျက်စိကို ပွတ်သတ် သန့်ရှင်းမှု လုပ်ပေးရမယ်။အဲဒီပန်းစိမ်ရေကို (၇)ရက်ဆက်တိုက် ခတ်ပေးရမယ်။ မျက်ချေးက တစ်နေ့ တခြား နည်းသွားမယ်။(၇)ရက်ခတ်မိရင်ပဲ မျက်စိမှုန်နေသူ ပြန်လင်းပြီး။ မျက်စိမှာ တိမ်ရှိရင် ပျောက်သွားမယ်။ မျက်စိအား အရင်ထက် ထူးထူးကဲကဲ ကောင်းလာ မယ်။(၇)ရက် ဆက်တိုက် ခတ်ပြီးရင် (၁၅)ရက်လောက် နားရမယ်။ နောက် (၁၅)ရက်ပြည့်ရင် ပထမ(၇)ရက်သုံးခဲ့တဲ့ မျက်စဉ်းရေကို မသုံးရဘူး။နောက်တစ်ခါ အသစ်ပြန်ပြီး ပန်းကိုစိမ် ရတဲ့မျက်စဉ်းရေကို (၇)ရက်ဆက်ခတ်။
မ်က္စဥ္းကို ေဖာ္ပါ့မယ္ ဆရာႀကီး” “မနက္ေစာေစာမွာ စံပယ္ပင္က စံပယ္ပန္း(၃)ပြင့္ ခူးယူရမယ္။ ေရေျပာင္ေအာင္ ေဆးရမယ္။ စံပယ္ပင္ မရွိတဲ့သူကလဲ စံပယ္ပန္းေရာင္းတဲ့ဆီကဝယ္ေပါ့။ဒါေပမယ့္ ခပ္လတ္လတ္ကို ဝယ္ပါ။ ႏြမ္းရင္ မယူနဲ႔။ “အဲဒီ စံပယ္ပန္းကို ဖန္ခြက္အလြတ္တစ္ခုမွာ ထည့္ရမယ္။ ေနာက္ ေရသန႔္သန႔္ ဖန္ခြက္(၃)ပုံ (၂)ပုံ ထည့္ရမယ္။တစ္ေန႔လုံး စိမ္ထားရမယ္။ ညမွာ မ်က္စိကို ခတ္ခါနီး ပန္းကို ဖယ္ပစ္လိုက္၊ အဲဒီေရကို အဲဒီည မ်က္စိကို ခတ္။ပထမဦးဆုံး ခတ္တဲ့ေန႔ နံနက္မွာ မ်က္စိမွာ ထူးထူးျခားျခား မ်က္ေခ်းေတြ ပိတ္ေနလိမ့္မည္။
အဝတ္ပြတစ္ခုကို ေရဆြတ္ၿပီး မ်က္စိကို ပြတ္သတ္ သန႔္ရွင္းမႈ လုပ္ေပးရမယ္။အဲဒီပန္းစိမ္ေရကို (၇)ရက္ဆက္တိုက္ ခတ္ေပးရမယ္။ မ်က္ေခ်းက တစ္ေန႔ တျခား နည္းသြားမယ္။(၇)ရက္ခတ္မိရင္ပဲ မ်က္စိမႈန္ေနသူ ျပန္လင္းၿပီး။ မ်က္စိမွာ တိမ္ရွိရင္ ေပ်ာက္သြားမယ္။ မ်က္စိအား အရင္ထက္ ထူးထူးကဲကဲ ေကာင္းလာ မယ္။(၇)ရက္ ဆက္တိုက္ ခတ္ၿပီးရင္ (၁၅)ရက္ေလာက္ နားရမယ္။ ေနာက္ (၁၅)ရက္ျပည့္ရင္ ပထမ(၇)ရက္သုံးခဲ့တဲ့ မ်က္စဥ္းေရကို မသုံးရဘူး။ေနာက္တစ္ခါ အသစ္ျပန္ၿပီး ပန္းကိုစိမ္ ရတဲ့မ်က္စဥ္းေရကို (၇)ရက္ဆက္ခတ္။
Previous Article မိမိနေတဲ့အိမ်က စီးပွားတက်မယ့်အိမ်လား..? စီးပွားခိုက်မယ့်အိမ်လား..?
Next Article ဆံသားဖြောင့်စင်းပြီးအရှည်မြန်စေဖို့ Vaseline နဲ့ပေါင်းတင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်း